Global Voices teny Malagasy » Bubisher: Boky maro eran’ny bus iray ho an’ireo ankizy any andrefan’i Sahara Andrefana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Mey 2009 16:24 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika avylavitra
Sokajy: Sahara Andrefana, Fanabeazana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fiteny, Haisoratra, Tanora, Vonjy Voina
Midika hoe “vorona milaza soa’ ny Bubisher .” Araka ny filazan'i Roge Blog , lohatenim- boky firaketana tononkalo sahraouie ihany koa izy io. Saingy ho an'ireo ankizy anjatony maro mipetraka ao amina toby natao ho an'ny mpitsoa-ponenana ao Sahara Andrefana, dia anarana bus iray feno boky izy ity, fanazavan'i Haz lo que deba s.
Abueliki blog  dia mandrisika antsika hamaky ny blaogy momba ny Bubisher , hamantatra ny bus-n'ny famoronana ary hanome fampaherezana ny asa fikarohan-javatra vaovao – tsy amin'ny resa-bola ihany fa koa amin'ny fizaràna fahaiza-manao sy manobo fahalalàna momba ny lalana nodiavin'ireo mpirotsaka antsitrapo amin'ny tetikasa sy ny fitiavany ilay asa. Isan'ireny ny mpanao politika, mpandraharaha eny amin'ny anjerimanontolo, trano manonta boky sy olona tsotra koa.
EL PAJARO QUE TRAE LA BUENA SUERTE  avy amin'i Irene Bailo  ao amin'ny Vimeo .
Kalandra Blog no manazava misimisy kokoa :
Te ho mpilatsaka an-tsitrapo ho amin'ny Bubisher ve ianao? Azonao atao tsara izany amin'ny alalan'ny fanatonana ny sakaizan-dry zareo Bubisher miisa 120  izay fandraisana andraikitra iarahana amin'ireo mpiara-miombona antoka miaraka amina efitrano fianarana na sekoly mihitsy aza mba hanangona fanampiana, na koa afaka manolotra boky na fanampiana avy aminao mivantana ianao. Afaka koa ianao mandika ireo lahatsoratry ry zareo  avy amin'ny teny Espaniola ho amin'ny tenim-pirenena hafa na koa azonao atao ny manely ny ny sary famantarana  ny Bubisher ho an'ireo namanao na manonta printy azy io haseho amin'ny mpiara-monina manodidina anao. Ary misy tena lehibe mihitsy, afaka mitsidika ny toby ho an'ny mpitsoa-ponenana ianao toy ny hoe mpirotsaka an-tsitrapo  ka mizara vakiteny tsara amin'ireo ankizy.
Ho famintinana, te-hanonona manokana ny mpanorina ny Bubisher aho, i Gonzalo Moure , mamahavaha ny resaka literatiora sy boky:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/07/2152/
 Haz lo que deba: http://hazloquedebas.blogspot.com/2008/08/qu-es-bubisher.html
 Bubisher : http://www.bubisher.com/
 manazava misimisy kokoa: http://www.kalandraka.com/blog/?p=2112
 sakaizan-dry zareo Bubisher miisa 120: http://www.bubisher.com/2009/03/120-amigos-del-bubisher.html
 mandika ireo lahatsoratry ry zareo: http://www.enriquecampoamor.com/Webs/Bubisher/Documentos/BUBI_FOLLETO.pdf
 sary famantarana: http://www.enriquecampoamor.com/Webs/Bubisher/Documentos/BUBI_DOSSIER.pdf
 toy ny hoe mpirotsaka an-tsitrapo: http://www.bubisher.com/2008/09/voluntarios_30.html